January 2020 - Myanmar Sports Villages
Monthly Archive: January, 2020
စပါးအသင်းအတွက် ဖြစ်မလာနိုင်တော့တဲ့ ထိပ်တန်းအပြောင်းအရွေ့တစ်ခု
လက်ရှိဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွေ့ကာလအတွင်း တောင်ပံကစားသမားတစ်ဦးခေါ်ယူထားတဲ့ စပါးအသင်းဟာ နောက်ထပ်ထိပ်တန်းတိုက်စစ် ကစားသမားတစ်ဦးကိုလည်းခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်း‌နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စပါးအသင်းဟာ လက်ရှိအပြောင်းအရွေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာ PSV အသင်းမှ အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ် တောင်ပံကစားသမား စတီဗင်ဘာ့ဂ်ဝင်းကိုခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် နောက်ထပ်တိုက်စစ်ကစားသမားခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်း‌နေပါတယ်။ အဓိက တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်း တံကောက်ကြောဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရချိန်မှာ ရီးယဲမက်ဒရစ်မှာ အနာဂတ်လှုပ်ခတ်နေတဲ့ ကစားသမားဟောင်း ဘေးလ်ကို အပြောင်းအရွေ့မပိတ်သိမ်းမီမှာ ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်း‌နေတာပါ။ ဥရောပမီဒီယာတစ်ခုရဲ့ဖော်ပြမှုအရ စပါးအသင်းဟာအပြောင်းအရွေ့နောက်ဆုံးရက် နောက်ဆုံးအချိန်မှာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့် အောင်မြင်နိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ စပါးနည်းပြမော်ရင်ဟိုကလည်း ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်အဆင့်ကစားရမယ့် အသင်းလူစာရင်းအင်အားကို ပိုမိုတောင့်တင်းစေဖို့ဂါရတ်ဘေးလ်ကိုခေါ်ယူလိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ စပါး ဥက္ကဌ လီဗိုင်းရဲ့ သဘောထားကြောင့် ပျက်ပြယ်သွားဖို့ရှိနေပါ တယ်။ လီဗိုင်းဟာအသက်(၃၀)အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဝေးလ်လက်ရွေးစင်ကစားသမားအတွက် ငွေကြေး များစွာသုံးစွဲဖို့ ဆန္ဒမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ စပိန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြမှုအရ စပါးအသင်းနဲ့ဂါရတ်ဘေးလ်ရဲ့ အပြောင်းအရွေ့ဟာ ကာလတိုအငှားခေါ်ယူမှုတစ်ခုသာဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် မက်ဒရစ်အခြေစိုက်ကလပ်နဲ့ ကစားသမားဘက်က အဆိုပါအခြေအနေကို စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဟုသိရပါတယ်။ [ZG] စပါးအသင္းအတြက္ ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့တဲ့ ထိပ္တန္းအေျပာင္းအေ႐ြ႕တစ္ခု ————– လက္ရွိဇန္နဝါရီအေျပာင္းအေ႐ြ႕ကာလအတြင္း...
Categories La Liga/Premier Leauge/Transfer
ဆောက်သမ်တန်နောက်ခံလူ ဆီးဒရစ်ဆိုးရက်စ်ကို အဌားဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် အာဆင်နယ်
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဆောက်သမ်တန်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဆီးဒရစ်ဆိုးရက်စ်ကို ရာသီဝက်အဌားဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အာဆင်နယ်ဝက်ဆိုက်ဒ်မှတဆင့် ကြေငြာသွားခဲ့ပါတယ်။ ယခုရာသီအကုန်မှာ ဆောက်သမ်တန်နှင့် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ့် ဆိုးရက်စ်ဟာ ဂန်းနားတို့ထံကို ရာသီဝက်အဌားနဲ့ ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး ရာသီအကုန်မှာတော့ အလွတ်ကြေးနဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဆီကို ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဆိုးရက်စ်ကို ရာသီကုန်လျှင် လေးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်ကိုပါ အဌားစာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးရက်စ်ဟာ အာတီတာနည်းပြလက်ထက်မှာတော့ စပိန်ကစားသမား ပါဘလိုမာရီ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အမ်းမရိတ်မြေကို ခြေချသည့် ကစားသမားသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဆိုးရက်စ်ကို ရာသီဝက်အဌားအတွက် အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပေါင် ၁ သန်းထက်နည်းသည့် ပမာဏကို ပေးချေခဲ့ရသည့်အပြင် ၊ ဆိုးရက်စ်ရဲ့ အဌားကာလအတွင်း လစာကို အာဆင်နယ်ဘက်မှ ပေးချေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြားသိရသည့် သတင်းများအရ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဆိုးရက်စ်ကို တပတ်လျှင် ပေါင် ၆ သောင်းခွဲပေးရမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုးရက်စ်ဟာ မီခေးအာတီတာအတွက်တော့ အားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပြီး...
Categories Premier Leauge/Transfer
ဘာစီလိုနာ နှင့် အာဆင်နယ်တို့ထက် ငွေကြေးပိုမိုသုံးစွဲကာ ဘရာဇီးလ်လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် မန်စီးတီး
မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ အာဆင်နယ်နှင့် ဘာစီလိုနာတို့ အပြိုင်ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည့် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ဘရာဇီးလ် လူငယ်ကြယ်ပွင့် ယန်းကူတိုအား ငွေကြေး အမြောက်အမြားသုံးစွဲကာ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါလူငယ်ကစားသမားရဲ့ တန်ကြေးဟာ ပေါင် ၄ သန်းမှ ၅ သန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိပေမယ့် မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ ကူတိုကို အနည်းဆုံး ပေါင် ၇.၅ သန်း မှ ၁၂ သန်းထိတိုးမြှင့်ကာ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ ကူတိုဟာ နောက်ခံညာအစွန်မှာ ကစားတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဘရာဇီးကလပ် ကိုရီတီဘာ ကလပ်မှာ ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်ရဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်ထဲမှာတော့ ကူတိုဟာ အရည်အသွေးမြင့် ကစားသမားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး အာဆင်နယ်အသင်းကလည်း ဟက်တာဘယ်လာရင်၏နေရာကို အစားထိုးရန်အတွက် ရေရှည်တွက်ပြီး ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နည်းတူစွာ ဘာစီလိုနာအသင်းသည်လည်း ကူတိုကို ခေါ်ယူဖို့ ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ [ZG] ဘာစီလုိနာ...
နောက်ဆုံးမှာတော့ မာရီကို ဈေးဆစ်ပြီး အောင်မြင်စွာနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည့် ဂန်းနား
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဖလာမင်ဂိုနောက်ခံလူ ပါဘလို မာရီကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၄.၂ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း The Mirror သတင်းစာက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယခင်က အာဆင်နယ်ဟာ မာရီကို ပေါင် ၇.၅ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ ဖလာမင်ဂိုနဲ့ သဘောတူညီမှုရယူထားတာပါ။ ဒီအတွက် မာရီဟာ အာဆင်နယ် အားကစားဒါရိုက်တာ အီဒူးနှင့်အတူ ဆေးစစ်ခံဖို့ အတူ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကိစ္စအားလုံးပြီးဆုံးချိန်မှ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဖလာမင်ဂိုတောင်းဆိုတဲ့ ဈေးကို မပေးနိုင်တဲ့အတွက် မာရီဟာ တောင်အမေရိကကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားသမားကိုယ်တိုင်က ဥရောပဘောလုံးလောကသို့ ပြန်လည်ခြေချလိုသည့် ဆန္ဒအရ နောက်ဆုံးမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ဖလာမင်ဂိုအသင်းတို့ကြားမှာ ပေါင် ၄.၂ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးဆုံး မာရီကို ရာသီဝက်အဌားဖြင့် ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီး နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ရောက်မှသာ အပြီးသတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာပဲ မာရီဟာ...
အင်တာမီလန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ မစောင့်ဆိုင်းနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် #အဲရစ်ဆင်
ကွန်တီရောက်လာကတည်းက ခြေသွက်လက်သွက်ဖြင့် ကစားသမားသစ်တွေကို ခေါ်ယူပြီး အင်အားဖြည့်တင်းလျက်ရှိသည့် အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ယမန်နေ့ညမှာတော့ စပါးစ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် အဲရစ်ဆင်ကို ပေါင် ၁၇.၅ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ကာလတစ်လျှောက် နာမည်ကြီးနေသည့် အဲရစ်ဆင်ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ စပါးစ်အသင်းကို စွန့်ခွာပြီး အင်တာမီလန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ စပါးစ်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်သော်လည်း အောင်မြင်မှုအနေဖြင့် လောက်လောက်လားလားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ဖလားများကို စိန်ခေါ်နိုင်သည့် အင်တာမီလန်အသင်းကို အဲရစ်ဆင်ဟာ ရွှေးချယ်သွားခဲ့တာပါ။ အင်တာမီလန်အသင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာတော့ သူဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အဲရစ်ဆင်က ယခုလိုဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။ “အင်တာမီလန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ မစောင့်ဆိုင်းနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအသင်းမှာ ကစားခွင့်ရတာဟာ တော်တော်လေးကြည်နူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အခုဆိုရင် အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ ကစားသမားသစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ အရမ်းလည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးတော့ ကျွန်တော် အဲရစ်ဆင်ရောက်လာပါပြီလို့ ပရိသတ်တွေကို မိတ်မဆက်ရဲလောက်အောင်ပါပဲ။ ဒီလိုနွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုမှုတွေနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အသားကျပြီးသားပါ။ ကျွန်တော့်ကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့...
Categories Serie A/Transfer
နောက်ဆုံးရ နံနက်ခင်းပိုင်း အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတိုများ
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဆောက်သမ်တန်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဆီးဒရစ်ဆိုးရက်စ်ကို ပေါင် ၅ သန်းဖြင့် စတင်ကမ်းလှမ်းပြီဖြစ်ကြောင်း Daily Mail သတင်းစာက ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆိုးရက်စ်ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ညာစွန်တွင် ကစားသော်လည်း အခြေအနေအရ ဘယ်စွန်တွင်လည်း ကစားနိုင်သည့် Full Back တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ဝါရင့်ကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒင်ဟိုကို နောက်ထပ်တစ်ရာသီ သက်တမ်းတိုးနိုင်ခဲ့ကြောင် မန်စီးတီးအသင်း၏ Official Website မှ ကြေငြာသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖလာမင်ဂိုအသင်းဟာ အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် တိုက်စစ်မှူးဘာဘိုဆာကို ယူရို ၁၇ သန်းဖြင့် အပြီးသတ်ရောင်းချခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဘိုဆာဟာ ယခုရာသီအစမှ ဘရာဇီးလ်ကလပ် ဖလာမင်ဂိုကို အဌားဖြင့် ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အင်တာမီလန်အသင်းမှာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့် မသေချာသည့်အတွက်ကြောင်း ဖလာမင်ဂိုကို အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲရစ်ဆင်ကို အင်တာမီလန်အသင်းသို့ ပေါင် ၁၇.၅...
စီးရီးအေထိပ်သီးကလပ် ရိုးမားအသင်းဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ လာမယ့် ဇွန်လမှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ့် စပိန်ကစားသမား ပတ်ဒရိုကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် စတင်ချိတ်ဆက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း Sky Sport Italia ကဖော်ပြထားပါတယ်။ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ပတ်ဒရိုဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၂၇ သန်းနှင့်အတူ ဘာစီလိုနာအသင်းမှ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ကစားတဲ့ ၅ ရာသီကြာကာလအတွင်း ပတ်ဒရိုဟာ သွင်းဂိုးပေါင်း ၄၂ ဂိုးအထ ိသွင်းယူခဲ့သလို၊ အောင်မြင်မှုအနေဖြင့်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားတစ်ကြိမ်၊ FA ဖလားတစ်ကြိမ် နှင့် ယူရိုပါလိဂ်ဖလား တစ်ကြိမ်တို့ကို ကိုင်မြှောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုရာသီမှာတော့ ပတ်ဒရိုဟာ ပြိုင်ပွဲစုံပွဲပေါင်း ၁၂ ပွဲသာ ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး သွင်းဂိုး တစ်ဂိုးနှင့် ဂိုးဖန်တီးမှု ၂ ကြိမ်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ရိုးမားအသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူးဇာနီအိုလို ကာလကြာရှည်စွာ အနားယူရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်...
Categories Premier Leauge/Serie A/Transfer
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဆောင်းရာသီစကတည်းက ကစားသမားပေါင်းများစွာကို ခေါ်ယူဖို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ တစ်ယောက်မှ ရောက်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဟာလန်းကို ခေါ်ယူဖို့ ဦးဆုံးချိတ်ဆက်ပေမယ့် ဒေါ့မွန်အသင်းက လက်ဦးသွားခဲ့သလို၊ ဖာနန်ဒက်စ်ကိစ္စမှာလည်း ပြောင်းရွှေ့ကြေး ညှိ့နှိုင်းမရတာကြောင့် ပျက်လုဆဲဆဲ အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အနေအထားဟာ ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာ လူသစ်ထပ်ဝယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တာဖြစ်ပြီး မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ရာသီမကုန်ခင် ဖြတ်သန်းရမယ့် ၄ လတာကာလဟာ အတော်လေးခက်ခဲမယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားကိုယ်တိုင်လည်း ကစားသမားသစ်ခေါ်ယူချင်ပေမယ့် ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအားနည်းပုံနှင့် ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလ၏ သဘောသဘာဝကြောင့် လိုချင်ပေမယ့် ငေးကြည့်ရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်နေပါတယ်။ ဆောင်းရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ဖို့ ခက်ခဲတက်တာဖြစ်ပြီး ငွေကြေးနိုင်နိုင်နင်းနင်းသုံးစွဲနိုင်မှသာ ကစားသမားကို ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ယူနိုက်တက်က အပြောင်းအရွှေ့သတင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိသလို၊ ဆောင်းရာသီဈေးကွက်ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဆိုးလ်ရှားက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော့်မှာတော့ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး...
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ဗဟိုခံစစ်ကစားသမားတွေဟာ ယခုရာသီမှာ အတော်လေးကြမ်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကြမ်းနေတယ်ဆိုတာက ပြစ်ဒဏ်ကျူ းလွန်တဲ့နေရာအတွက် ပြောတာပါ။ ဗဟိုခံစစ်မှူး၄ ယောက်ပေါင်းရင် စုစုပေါင်း အဝါကတ်ဟာ ၂၃ ကတ်အထိရှိခဲ့သလို၊ အနီကတ်ကလည်း ၂ ကတ်အထိ ပြသခံထားရပါတယ်။ ၂၃ ကတ်ထဲမှာတော့ အများဆုံးပြသခံထားရတဲ့ ကစားသမားဟာ ဂျရတ်ပီကေးဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် ပီကေးဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ ကစားပြီးချိန်မှာတော့ စုစုပေါင်း ၁၃ ကတ်အထိ ပြသခံထားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ ဒုတိယလိုက်နေတာက လန့်ဂလက်ချ်ပါ။ အဝါကတ် ၇ ကတ်နဲ့ အနီကတ် ၁ ကတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တတိယနေရာမှာတော့ အမ်တီတီဖြစ်ပြီးတော့ အဝါကတ် ၃ ကတ်ပြသထားခံထားရသလို၊ စတုတ္တနေရာမှာတော့ ဘာစီလိုနာ B အသင်းခေါင်းဆောင် ရော်နယ်လ် အာရူဂျိုက ဆီးဗီးလ်နဲ့ တပွဲဝင်ကန်ချိန်မှာ အနီကတ်...
ပါဘလိုမာရီကို ခေါ်ယူဖို့ အာဆင်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းသွားခဲ့သည့် ဖာဒီနန်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၏ ဂန္ဓဝင်ကစားသမားဟောင်း ရီယိုဖာဒီနန်က ဖလာမင်ဂိုအသင်း၏ နောက်ခံလူ ပါဘလို မာရီကို ရအောင်ခေါ်ယူဖို့အတွက် အာဆင်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူ းကောင်းများရှိသည့်အတွက်ကြောင့် သွင်းဂိုးအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုသော်လည်း ခံစစ်ပိုင်းကတော့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိတာကြောင့် အမြဲတမ်းလိုလိုဂိုးတွေပြန်ပြန်ပေးနေရပါတယ်။ အသင်းကြီး ၆ သင်းထဲမှာလည်း အာဆင်နယ်ရဲ့ ခံစစ်ဟာ အားအနည်းဆုံးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ၃ ရာသီဆက်ကို ပေးဂိုး ၄၀ အထက်မှာ ခွင့်ပြုထားရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း အားကိုးရတဲ့ နောက်ခံလူ ချိန်ဘာဟာ ရာသီအကုန်ထိ အနားယူရတော့မှာဖြစ်သလို၊ မူစတာဖီကလည်း ဘုန်းမောက်နဲ့ ပွဲမှာ ထိခိုက်မိတာကြောင့် ထမ်းစင်နဲ့ အပြင်ကို ခေါ်ထုတ်ခဲ့ရကာ ဆေးစစ်ချက်အဖြေကို စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဒဏ်ရာကနေပြန်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဟိုးလ်ဒင်းသည်လည်း ပုံမှန်ခြေစွမ်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ဖာဒီနန်က ဖလာမင်ဂိုနောက်ခံလူ ပါဘလို မာရီကို ရအောင် ခေါ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “ဒီလိုကစားသမားမျိုးက အာတီတာအလိုရှိတဲ့ ကစားသမားမျိုးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။...